Shariif Xasan Iyo Wasiiradiisa Oo Ka Shiray Arrimaha Amniga Iyo Abaaraha – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka K/galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta shir guddoomiyey kulan golahiisa wasiirada ku yeesheen magaalada Baydhabo, waxaana kulankaasi looga hadlayey arrimo ku aadan amniga iyo abaaraha ka jira deegaannada maamulka K/galbeed.
Kulankan oo saacado qaatey ayaa markii uu soo gabgaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka K/galbeed Xasan Cabdi Maxamed, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii laga wada hadlay.
Waxa uu sheegay wasiirka in ugu horreyn ammaan loo jeediyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada ammaanka K/galbeed oo uu sheegay iney qabteen shaqooyin muhiim ah si amniga loo sugo, waxaana uu sheegay in wasiirada isla garteen in la abaalmariyo saraakiisha.
Sidoo kale wasiirka K/galbeed ayaa diiradda saaray arrimaha ku aadan abaaraha ka jira deegaannada maamulkaasi uu ka arrimiyo, waxaana ay ugu baaqeen dowladda Federaalka Soomaaliya iyo guddiga Qaran ee abaarah in degdeg ay wax uga qabtaan xaaladda abaareed ee K/galbeed.
Wasiir Cabdi ayaa dhanka kale hoosta ka xarriiqay in dhowaan maamulka K/galbeed uugurmad gaarsiin doono dad kasoo barakacay abaaraha misane ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Sidee Ayeey Culimada Soomaaliyeed Uga Qeyb Qaadan Karaan Dib u Heshiisiinta?
Guddiga farsamada ee shirka lagu qabanayo Garbahaarey oo maanta kulmay
WAR DEG DEG AH:- Maamulka Galmudug Iyo Ahlu-sunna Oo Heshiis Ku Gaaray Degmada Cadaado
over the counter viagra cvs pugvftpm cheap sildenafil viagra...
[url=https://cialinic.com/]generic cialis 20 mg price[/url]...